Maxaa looga hadlay kulankii dhex maray Maxamed Mursal iyo James Swan? – Hornafrik Media Network
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay wakiilka gaarka ah xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan.
kulanka intii uu socday ayaa waxaa la sheegay in loga wada hadlay arrimo badan oo ka mid ah shuruucda hortaala baarlamaanka gaar taageeridda meelmarinta sharciyada la xariirta doorashooyinka.
Waxyaabaha intiisa badan kulankas looga hadlay ayaa waxaa ka mid ah arrimaha dib u eegista dastuurka, dhameystirkiisa iyo sidoo kale sharciyada muhiimka ay tahay in golaha shacabka ay meel mariyaan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo haatan ah ku simaha madaxweynaha dalka iyo wakiilka xoghayaha guud ayaa inta kulanka uu socday isla soo hadal qaaday xoojint xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qaramada midoobay
Xoghayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo kulanka ka dib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo wakiilka xoghayaha Qaramada midoobay ay isku afgarteen dhamaan waxyabahii laga wada hadlay.
Safiirka USA ee Kenya: “Waxaan Farmaajo kala hadlay in uu ka laabto kiiska badda”